Umhla My Pet » Yintoni Women Cinga Malunga Xa Usabelana Ngesondo
Nangona ngesondo eyodwa, olusondeleyo, kwi-the-mzuzu isenzo, amaxesha iingqondo kwabasetyhini badla ukulahlekana, kungakhathaliseki ukuba mkhulu besini na. Ngezantsi nje ezinye iingcamango ungangenisa ingqondo labasetyhini ngexesha neentlobano.
Shows TV / Iifilimu: Enoba ukhe wabukela nje imovie omkhulu okanye phakathi uthotho TV, amaxesha ukuwo sebali nabalinganiswa yenzeka ngexesha lokwabelana ngesondo. Asikwazi kuzibamba ukuba babe “a-ha” mzuzu phakathi ngesondo, oko kuthetha ukuba besini kukuba eyoyikekayo.
isidlo sasemini: amadoda, ukuba kwenzeka ntoni ukuba utshayele lady zakho ezo ezinyaweni zakhe ngokukhawuleza njengoko engena emnyango evela amathuba kuye imini zomsebenzi uya ukucinga isidlo ngoxa ngaphakathi kwayo. Asikwazi kuzibamba ukuba nako ukwenza izinto ezininzi ezahlukeneyo izinto, plus masenze sinyaniseke, ngesondo Kudla up esabo kwaye ukwazi oko ufuna ukwenza kuya kukunceda ufumane isidlo ukuba ubukhawuleza.
Ukutshintsha iiNdawo: Nantsi eyona nyaniso, maxa ungaphangelanga-sync kunye namaqabane ethu. Yinto embi ingakumbi xa elinye iqabane unandipha kube ngaphezu kwezinye. Xa amanenekazi ukubona guys yabo kakhulu kwindawo ethile, abayi cebisa entsha ukususela ulonwabo lwethu luvela zenzakalise cum yethu. Xa oku kusenzeka, iingcinga “Nguye kakhulu kule ndawo ukutshintsha. Kufuneka ngathi kuyo kanye njengoko yena”, “kutheni na ke oko kwindawo enye entsha ndizama nje eyithanda?”, kunye / okanye “dubula, kutheni le ndawo ubuhlungu?” Khawukhe ingqondo.
iiNdawo ezintsha: Nangona kokutshintshela phezulu umandlalo iyingcamango elungileyo, zonke izikhundla zezi njengoko kubonakala kulula. Kubalulekile ukuba kukuzonwabisa behleka, ingakumbi xa izikhundla musa ngathi nje kakhulu ukusebenza. ku “Yena ngempazamo gxugxeka emngxunyeni engalunganga” ukuze “Ngamnye kuthi kufika ikhondomu ngaphandle singawi” ukuze “Ndicinga ukuze Fart ukuba uthwabaza aye kuyo ngolu hlobo”, zonke iingcamango nasekutshabhiseni iphumele iingqondo wabafazi.
Orgasms: Manene, sonke siyazi ukuba ngaxa thina sabathathau phambi umntu wethu. Nangona oku akuyi kuba yinto eqhubeka rhoqo, oku kuthe kwenzeka ixesha nexesha. yaye ngoxa, nasemva kwincanca yethu, besini uziva emangalisayo, Kwakhona sifuna ukukholisa iqabane yethu. Ke kula maxesha xa abafazi bacinga “Ukuba bayancwina ikhwaza, mhlawumbi eza kumnceda sabathathau”.
izilwanyana: bonke sibathanda izilwanyana zethu njengoko ulilungu okhethekileyo kakhulu lentsapho. Ngenxa yokuba thina badla ukugcina ucango oluvulekileyo ngexesha ngesondo njengoko meows, Barks, kwaye besonwaya emnyango ngexesha ngesondo unako kuyakuphazamisa mood. nokuba, nale ukhetho kufike esi simemo umhlobo wakho inoboya Ndingazibukela ukuba neentlobano zesini. Ke xa ukutsala amehlo abo ukuba sicinga “Andikwazi ngesondo kukululangazelela pet yam kum” okanye “Kutheni / yena sifudukele kwindawo ekufuphi kuthi? Andifuni ngesondo lethu ukuba lomncedis”.
Musa ukoyika, lamadoda njengokuba ezi ngcinga iphumele iingqondo wabafazi, besini nangoku mnandi. kunye nabasetyhini, ufuna Ungakhathazeki njengoko nina kuphela multi-ucinga ngexesha lokwabelana ngesondo.